पोर्टो रिको - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
उरुग्वे: पहिलो चार जाँच गरिएको कोरोनाभाइरस मुद्दाको पुष्टि भयो
मार्च 14, 2020 मार्च 14, 2020 जोइस डेभिस	टिप्पणी छोड्नुहोस्
उरुग्वेको सरकारले सीमाको आंशिक बन्द हुने, सार्वजनिक कार्यक्रमको निलम्बन र रोकथामको रूपमा “स्वास्थ्य आपतकालिन” घोषणा गर्‍यो। COVID-19 को चार सकारात्मक घटनाहरूको पहिचान पछि। अपनाउनु पर्ने उपायहरूको सन्दर्भमा, "जोखिममा परेका" वा रोगसूचक घोषणा गरिएका देशहरूबाट यात्रीहरूको लागि अनिवार्य १ 14-दिनको क्वारेन्टाइन हुनेछ।
थ्रीको कम्पनी: वान्डा भाज्कीज उच्च अदालतको निर्णय पछि एक हप्तामा तेस्रो प्यर्टो रिका गभर्नर बन्छन्
अगस्ट 8, 2019 अगस्ट 10, 2019 रोबर्ट मार्टिन (CN स्टाफ)	टिप्पणी छोड्नुहोस्
हामीलाई रोक्नुहोस् यदि तपाईंले यो सुन्नुभएको छ, तर प्यूर्टो रिको सँग नयाँ गभर्नर छ। बुधवारको संवैधानिक स्नाफु पछि न्यायमन्त्री वान्डा भाज्जाजा - सेक्रेटरी स्टेट पेद्रो पियरलुइसी एक हप्तामा अमेरिकी राष्ट्रमण्डलका तेस्रो गभर्नर बन्नुभयो। अपमानित पूर्व मुख्य कार्यकारी, रिकार्डो रोसेल्लोप्रति वफादारको रूपमा देखिएको, भाज्क्ज एक महिला हुन् जसले राज्यपाल बन्न चाहेनन्, महिलालगायत उनी आफै। बरु, उनले बुधवारको कार्यालयलाई विश्वको सबैभन्दा नयाँ, र सबैभन्दा अनिच्छुक, सरकार प्रमुखको रूपमा ग्रहण गरे।
जुलाई 30, 2019 अगस्ट 10, 2019 रोबर्ट मार्टिन (CN स्टाफ)	1 टिप्पणी
प्यूर्टो रिकोको गभर्नर बन्न को लाग्छ? एम्बेटल इनकम्बान्ट रिकार्डो रोजेलोसँग "Rickyleaks" पाठ सन्देश घोटाला मा कार्यालय राजीनामा भएको छ, र कार्यालय छोड्ने अगस्ट २, महिला लाइनमा पछि हुने महिलाले जागिर चाहँदैन। व्यक्ति जसले उसलाई शक्तिबाट बाहिर खेद्यो उनी पनि उनी चाहँदैनन्। यसले टापु र अमेरिकी राष्ट्रमंडलमा एक सानो उत्तराधिकारको संकट पैदा गरेको छ र हामी सबैलाई पोर्टो रिकान नागरिकशास्त्रमा पाठ सिकाइएको छ। यसैबीच, रोसेल्लो प्रशासन र उसको समर्थक राज्यपूजक नयाँ प्रोग्रेसिभ पार्टीको पर्दा पछाडि के भयो भन्नेबारे थप विवरणहरू देखा पर्दै छन्।
राज्यपालको राजीनामा पछि प्रदर्शनकारीहरू पोर्टो रिकोमा जारी
जुलाई 26, 2019 अगस्ट 10, 2019 डोरिस म्क्वाया	टिप्पणी छोड्नुहोस्
क्यारिबियन टापुमा राजनैतिक स over्कट धेरै टाढा छ। राज्यपाल रिकार्डो रोजेलोले राजीनामा गरेपछि पनि, राजनीतिक प्रतिष्ठानमा आक्रोशले हजारौं मानिसलाई सडकमा ड्राइभ गर्न जारी राख्यो.
“हट कुकुरहरू! हट कुकुर! "यसको कुनै मूल्य छैन," एक मानिस प्रदर्शनकारतर्फ कराउँछन्। ठीक अर्को ढोकामा, पानी नि: शुल्क वितरण गरिन्छ। पनी पछि पनि राज्यपाल रिकार्डो रोजेल्लोको राजीनामा, हजारौं फेरि सान जुआनमा भेला भए। गाउँदै र नाच्दै तिनीहरू राजधानीको सडकहरू हुँदै हीराम बिथ्रोन बेसबल स्टेडियममा जान्छन्।
पोर्टो रिकोका गभर्नर रिकार्डो रोसेलोले जन प्रदर्शनको अनुसरणपछि राजीनामा गरे
जुलाई 25, 2019 अगस्ट 10, 2019 भिन्सेन्ट ओटेग्नो	टिप्पणी छोड्नुहोस्
पोर्टो रिकन गभर्नर Ricardo Rossello महिला, समलि .्गी, र पीडितको बारेमा उजागर गरिएको अपमानजनक टिप्पणी पछि दुई हप्ताको जनआन्दोलन पछि बुधवार उनले राजीनामाको घोषणा गरे तूफान मारिया। “आरोप सुनेपछि र [परिवारसँग कुरा गरिसकेपछि] मैले निस्वार्थ भावमा निम्न निर्णय लिएँ: आज म घोषणा गर्दछु कि राज्यपालको पदबाट शुक्रवार २ August अगस्तदेखि १ 2०० घण्टामा राजीनामा हुनेछु,” रोजेलोले एक भिडियोमा भने सरकार द्वारा।
पोर्टो रिकन्स "रिकी लीक" को गभर्नरको राजीनामा, सोमबार आउने अधिकको मांग
सम्पादकको पिक जुलाई 21, 2019 अगस्ट 10, 2019 रोबर्ट मार्टिन (CN स्टाफ)	टिप्पणी छोड्नुहोस्
के सुरुमा एक विशाल भ्रष्टाचार कांड को कहानी मा एक नाबालिग, असंबंधित विवरण जस्तो देखिन्थ्यो पियर्टो रिको मा एक पूर्ण विकसित राजनीतिक संकट मा उब्जियो। सय जुआनको सडकमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरू शनिबार साना जुआनको सडकमा उत्रिए र गम्भीर गभर्नर रिकार्डो रोजेल्लोको राजीनामाको माग गर्न सोमबार योजना बनाए। गत हप्ताको आपत्तिजनक पाठ सन्देशको खुलासा पछि केही हदसम्म विरोध प्रदर्शन भएको थियो - अब रोस्सेलो र उसको भित्री घेराको बीचमा "रिकी लीक" भनेर चिनिन्छ। यद्यपि अमेरिकी सामन्य मुलुकका आफन्तहरुमा अमेरिकी नागरिकहरुका बासिन्दाहरुका लागि - यो विद्रोह उनीहरूको टापुमा देखिने भन्दा बेवास्ता गरिएको थियो।
जुलाई 12, 2019 अगस्ट 10, 2019 रोबर्ट मार्टिन (CN स्टाफ)	1 टिप्पणी
दुई जना सरकारी अधिकारीहरू बुधवार पक्राउ परेका थिए किनभने अमेरिकी अधिकारीहरूले व्यापक भ्रष्टाचार अभियोग अनलक गरेका थिए। यस टापुका शिक्षा सचिव जुलिया क्यालेर र पुर्टो रिको स्वास्थ्य बीमा प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने एन्जेला अवीला-मरेरोलाई एफबीआई एजेन्टले पक्राउ गरेका साथै अन्य चार व्यक्ति पनि थिए। दुबैमाथि सरकारी सम्झौतामा $ १.15.5. million मिलियन डाइरेक्ट भएको व्यवसायमा उनीहरूको सम्बन्ध रहेको आरोप छ। भ्रष्टाचारले यस टापुलाई वर्षौंसम्म सताएको छ र यसले समस्यालाई जटिल बनाउन सक्छ किनकि यसले आपतकालीन सहायता र पैसाको लागि आधारभूत सेवाहरूको लागि पैसा मागेको छ।